Macalin Dugsi & afar ruux oo kale oo lagu dilay Gobolka Galgaduud – AfmoNews
Macalin Dugsi & afar ruux oo kale oo lagu dilay Gobolka Galgaduud
Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Somaliya ayaa sheegaya dabley hubaysan inay dil u gaysteen dad shacab ah.
Dadkaan la dilay ayaa waxaa ku jira Macalin Dugsi Qur,aan & afar ruux oo kale, kuwaasi oo galabta lagu toogtay deegaan duleedka ka ah Degmada Balanbal ee Gobolka Galgaduud.
War kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Galmudug ayaa waxaa loogu tacsiyadeeyay dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay deegaanka Xirsi Lugeey ee duleedka degmada Balanballe, iyada oo lala wadaagay ehelada, qoysaska, qaraabada iyo guud ahaan umadda reer Galmudug.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug ayaa sheegtay inay ka shaqeyn doonto sidii loo soo afjari lahaa colaad beeleedyada ku soo laa laabatay Gobolka, waxaana Wasaaradda Amniga Galmudug loogu baaqay inay soo qabtaan dadkii falkaasi ka dambeeyay.
Dilkaan ayaa wuxuu salka ku haayaa falal la xiriira aargoosi aanooyin qabiil oo horay uga dhacay deegaano ka tirsan Galmudug.
Maamulka Galmudug ayaan illaa & hadda ku guuleysan wax ka qabashada falalka la xiriira aanooyinka qabiilka oo si joogto ah uga dhaca deeganada Galmudug.